tag ကို: indianapolis colt | Martech Zone
tag ကို: indianapolis colt
ကျွန်ုပ်တို့၏ 2012 Super Bowl, ဗားရှင်း 2!
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
တိုးတက်မှုဆက်ရှိနေသည်။ Pat Coyle နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင်ထူးချွန်သောကျွမ်းကျင်မှုများ (Tim နှင့် Curtis) နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ Indianapolis ရှိ 2012 Super Bowl အတွက်လေလံဆွဲရန်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Super Bowl ကော်မတီကိုဗဟိုအင်ဒီယာနားကော်ပိုရိတ်မိတ်ဖက်အသင်းဥက္ကPresident္ဌ Mark Miles က ဦး ဆောင်သည်။ မာ့ခ်သည်ထူးခြားသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပြီးရပ်ကွက်၏ပံ့ပိုးမှုကိုအသိပေးရန်နှင့် ၀ က်ဘ်နည်းပညာများကိုအလွယ်တကူလက်ခံသည်။ ဒီ 'ဗားရှင်း'
လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ် SAP စစ်တမ်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုအချို့ပြုလုပ်လိုသောစိတ်ဝင်စားသူများကို Shel ကမေးသောအခါငါအခွင့်အလမ်းကိုမြန်မြန်ချက်ချင်းရေးသားခဲ့သည်။ Shel ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုများကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်တင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဒါကအပိုင်း ၁ ပါ။ သင်လူမှုမီဒီယာကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သို့စတင်စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြောပြပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ပုံနှိပ်မီဒီယာတွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအလုပ်လုပ်နေစဉ်အင်တာနက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်လာသည်ကိုကြည့်ခဲ့သည်
ဒီသောကြာနေ့မှာအချို့သောနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများ၊ ဒေသခံစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူပရိသတ်များနှင့်အတူ“ Make it Personal” ပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ပရိသတ်များနှင့်အတူတွေ့ဆုံရန်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ဒါကစိတ်ကူးကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ ၄ င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ပရိသတ်များနှင့်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်နီးကပ်စွာဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့ရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်တိုင်းကိုအသုံးချနေကြသည်။